DAAWO SAWIRRO: Faras loo aqoonsaday kan ugu quruxda badan Dunida !! | Arrimaha Bulshada
Home News DAAWO SAWIRRO: Faras loo aqoonsaday kan ugu quruxda badan Dunida !!
Bulsha:- Gamaanku wuxuu had iyo jeer ahaa qeyb kamid ah nolosha insaanka – u eegis la’aan waqtiga iyo casriga lagu jiro. Wuxuu lahaa qeyb weyn oo noloshu la’aantiis aysan suura-gal noqoteen. Hayeeshe qarniyadii danbe oo adeegsiga gaadiidka afar-lugoodka uu soo kordhay, ku tiirsanaanta Gamaanka aad bay hoos ugu dhacday.